Madaxweyne Xasan iyo wafdigiisa oo ka laabtay Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigii la socday ee labadii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarrunta gobolka Baay ayaa saaka dib ugu soo laabtay Muqdisho.
Intuu uu madaxweynuhu joogay magaalada Beydhabo ayaa waxa uu kulamo gooni gooni ah halkaasi kula soo qaatay siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka iyo xubno ka socday dhamaan qeybaha bulshada, isagoo kala hadlay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyin ka dhaca deegaannadaasi, kadib markii halkaas looga dhawaaqay labo maamul oo iska soo horjeeda.
Xubno u hadlay maamulka lixda gobol ee la kulmay madaxda dowladda ayaa sheegay inay mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya u sheegeen in la raacayo halka ay shacabku taageersan yihiin.
Sidoo kale, xubnahan ayaa sheegay in markii hore khalad laga fahamsiiyay sida ay wax u doonayso dowladda Soomaaliya, balse ay kulankan ku ogaadeen in dowladdu ay doonayso inay taageerto halka loo badan yahay.
Ergooyinkii ka socday dhinaca maamulka saddexda gobol ayaa iyaguna u sheegay war-baahinta markii uu kulanku soo dhammaaday in madaxweynaha ay u sheegeen inay raalli ka yihiin xukuumadda ayna doonayaan in la aqoonsado.
Qaar ka mid ah odayaasha la kulmay madaxweynaha ayaa sheegay in madaxweyne Xasan u ballan qaaday inuu markale dib ugu laabanayo Muqdisho kadib marka uu soo dhameysto safar uu debadda ugu ambabaxyo.
Waxey sidoo kale odayaashani sheegeen in lagu heshiiyey in la dejiyi bulshada Baydhabo, islamarkaana alaga fogaado wax kasta ee dhibaato abuuri kara.
Odayaashan ayaa sheegay in markaas kadib lasii ambaqaadi doono wada xaajoodka la xiriira sidii xal looga gaari lahaa dhibaatasa siyaasadeed ee ka jirtay Baydhabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa Baydhabo siyaabo kala duwan u tegay si loo qaboojiyo khilaaf ka dhashay maamul u sameynta koonfur galbeed ee Soomaaliya.